La-taliyaha siyaasadeed wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso xeryo-waxbarasho! : Martin Vrijland
La-taliyaha siyaasadeed wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso xeryo-waxbarasho!
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 10 December 2019	• 13 Comments
CTP Veldzicht, isha: youtube.nl
Waxaan wax ka qoraayay sanado badan hadana hada si cad ayey banaanka ugu soo baxday oo ay siyaasiyiintu ugu baaqayaan xero waxbarasho. Nederland dhexdeeda waxaan ugu yeeri karnaa 'hay'ad dib-u-dejin', sida gobolka Shiinaha ee Uyur, laakiin Mareykanka Mareykanka warkiisa George Orwell xitaa looma hadlin.
Anaga Nederlandaysku si xariifnimo leh ayaan wax kasta ugu diyaarinay ereyada sida 'daryeel'. Dalka Mareykanka, la-taliye siyaasadeed iyo istiraatiijiyad warbaahineed oo la yiraahdo Rick Wilson ayaa soo dhigay bartiisa twitter-ka shalay oo uu si fudud ugu gudbiyo ereyga "xeryaha-waxbarasho." Fiiri oo fiiro gaar ah u yeelo jawaab celintaada koowaad. Waxaan ku kalsoon nahay in markii aad tallaalka ku jirto, runti aad u maleyneyso inay tani fiicantahay?
Anti-vaxxers waa karbaash iyo dood adag oo ku saabsan xerooyinka dib-u-soo-kabashada, xilligii degdega ee hantidooda, iyo gelinta carruurtooda gelinta ilaalinta. https://t.co/9vHPeEl9hf
Anti-vaxxers waa karbaash iyo dood xoog leh oo loogu talagalay xerooyinka dib-u-soo-celinta, qabashada deg deg ah ee hantidooda iyo haynta carruurtooda.
Maxaad ugu malaynaysaa inay taasi fiicantahay? Sababta oo ah waxaa kuu sheegay warbaahinta iyo “khubaro” in aadan talaalin dadka waa qatar. Waxaa sidoo kale laguu sheegay warbaahintaas iyo “khubaro” in dhammaan aragtiyahaan shirqoolada ay khaldan yihiin. Haddii dadka qaarkiis ay booqdeen websaydhkan inbadan oo intaas ka badan halkanna ay ka sii gudbayaan dhaleeceynta oo dhan, waxay kaloo ogaan lahaayeen in mucaaradka la xakameeyo ay had iyo jeer si ula kac ah ugu qasmaan beenta, si ay warbaahinta u adeegsadaan beenta iskood u dhisan ee looga takhaluso fikradaha talaalka. si loo ruxruxo. Taasi waa ujeedada mucaaradka la xakameeyey oo waxaan marar badan halkan ku sharaxay websaydhka.
Si kastaba ha noqotee, waxa hadda jira ayaa ah in aragti guud laga dhex abuuray dadka, taas oo sheegaysa in haddii qayb yar oo ka mid ah dadku aysan is tallaalin, kooxdan (aan la tallaalin) waxay qatar ku tahay inteeda kale. Haddii dadka aan la tallaalin ay bukoodaan, way qaadsiin karaan dadka la tallaalay. Markaa miyaad leedahay caqli ahaan maskaxda si aad u ogaato in tallaalku uusan u shaqeynaynin sidoo kale? Haddii dadka laga tallaalo fayras oo ay bukoodaan, tallaalku sida muuqata si fiican uma shaqeeyo.
Sanadihii la soo dhaafay waxaan ka digayay marar badan in aan ku jirno nidaam fasiisimo iyo in dhammaan shuruucda loo diyaariyay soo aruurinta iyo xiridda qof walba oo fikradihiisa ka duwan kan gobolka. Soo jeedintan Mareykanka ah ee la taaban karo ee loogu talagalay kaamam-dib-u-soo-noqoshada, aqbalitaanka dadka ayaa la cabiraa. Tirada waxyaabaha jecel ee ka hooseeya barta tweet-ka ayaa muujineysa inta qof ee horeyba u oggolaaday. Ficil ahaan, si kastaba ha noqotee, sharciga oo dhan ayaa hore uga jiray Netherlands si meesha looga saaro kuwa aan la aqoonsan guryahooda. Xeerka daryeelka caafimaadka khasabka ah ee khasabka ah (WvGGZ) wuxuu dhaqan gelayaa 2020. Sharcigaasi wuxuu suurtogal ka dhigayaa wixii dib loogu dhigay golihii hore, kaas oo ah xiraan dadka si ay u indha indheeyaan oo ay u maareeyaan dawooyinka iyagoon fara gelin ku samaynin xaakinka ama dhakhtarka dhimirka (fiiri sharaxaad faahfaahsan).
Ma fahantay waxa ay taasi ka dhigan tahay? Adiga oo aan ka warqabin, xerooyinka dib-u-habeynta ee Nederlaand horeyba waa la xaqiijiyey. Kaliya uma aanannaan furin si furan oo anaguna uguma yeedhin "xero-waxbarasho". Waxaan ugu magacdarnay xarumaha daryeelka caafimaadka maskaxda (GGZ).
Hague wuxuu riixay dhammaan sharciyadii loo baahnaa taas oo ka dhalatay baaqa soo dhexgalka ka dib kiisaska xadgudubka iyo dilka. Kaliya dhagsii isku xirka buluugga ah ee sharraxaadda ballaaran oo weydii naftaada in hawlgalladaan nafsaaniga ah (PsyOps) ay awood u yeesheen inay ku riixaan sharcigaas oo dhan (iyada oo aan dadku tixgelinaynin in tani ay xoogaa sii fogeysay) ). Haddii aad u keentid dhibaato saameyn weyn oo xagga warbaahinta warbaahinta ah, waxaad dadka ka dhigaysaa xanaaq, cabsi iyo shucuur. Markaa waxaad u soo gelisay habka aqbalaada sharci si ay u ogaanin in waqti dhow ama goor dambe ay iskooda wax yeeli karto.
Waxaa jira dhowr alibis oo dib-loogu-baranayo xeryaha dib-u-waxbarasho ee Nederland (GGZ):
Diidmo casharrada transgender-ka dugsiga
dabeecad xumada dabeecad xumada (OOG)
Khilaafaadka dabeecadeed ee iska soo horjeedda (OOG) dabcan si weyn ayaa loo qaadan karaa. Goormaad tahay mucaarad diiddan? Waad qiyaasi kartaa. Qaybta dhammaysa muuqaalku waa tan dambe.
Aynu eegno qeexitaanka "psychotic." Tani waa sababta oo ah wax walba waa la daboolay. Ereyga "psychotic" waxaad u badan tahay inaad ka fikirto dadka waalan oo istaagaya balakoonka si ay isu hoos u dhigaan. Maya, durbaba waad tahay cilmi nafsi haddii aad leedahay "khiyaamo". Su'aashu waxay markaa raacaysaa waxa qeexitaanka khayaanadu tahay.
Websaydhka 'doordordokter.nl' waa qeyb ka mid ah boggaga internetka oo dadka ugu haga “hay'adda daryeelka caafimaad ee saxda ah” (solvo.nl). Markaa waa naadi ku xiran GGZ. Sida laga soo xigtay boggaas Qeexidda khiyaano waa sidan soo socota:
Sida ku xusan qeexitaanka maskaxda (eeg halkan) waa qof cilminafsi maskaxeed. Waa markaa waxa ku saabsan waxa ka soo hor jeeda runta. Su’aasha ugu weyni waa: yaa go’aamiya ‘xaqiiqdaas’.
Waa hagaag: haddii gobolku go'aansado 'xaqiiqda' inay tahay in tallaalku adiga kuu wanaagsan yahay, in tillaabooyinka cimilada ay muhiim u yihiin maxaa yeelay adduunku haddii kale wuu burburayaa sannadihii 12 (sababtuna waa CO2 iyo kuleylka adduunka sabab ahaan), inaad wali haysato jinsigaaga Haddii aad xulan karto oo aadan dhalasho ahayn wiil ama gabadh, markaa waxaad yeelan doontaa isfaham la'aan haddii "aamintaadu ay ka soo horjeeddo xaqiiqdaas". Haddii aad aamminsan tahay in 911 uu ahaa shaqo gudaha ah, markaa gobolka ayaa laga yaabaa inuu ogaado in tani ay kaga duwan tahay xaqiiqda ka dibna waxaad leedahay khiyaano.
Qeexitaannadii horeba way jireen, sharci ayaa hore u jiray, cilmu-nafsiga mar horeba waa diyaar. Nederland waa waddankii ugu horreeyay ee Yurub ee awood u leh inay buuxiyaan xeryahooda dib-u-waxbarasho. The Ruinerwold PsyOp wuxuu meesha ka saaray marinka ugu dambeeya, isagoo ah baahida loo qabo amar maxkamadeed; waxaa kale oo loo yaqaanaa amar maxkamad baarid.
Waa macnaha guud ee aan kugula talinayo inaad akhriso buugga "Xaqiiqada sida aan u aragnay."
Soodhawrka xiriiriya: doctordokter.nl, ypsilon.org
Gobol booliis ah, waxaad dooneysaa in laga mamnuuco filimaanta booliiska iyo bixiyeyaasha "caawinta"
Baro taariikhda si aad u fahamto ajendaha UN-ka ee 2030
Cadaadiska saaran caruurta waa mid aad u weyn!
Tags: aqbalida, Anti-vaxxers, featured, GGZ, xerada dib-u-dhiska, xeryo dib-u-dhiska, EYE, dhaqan xumeyn dabeecad xumo, cilmi nafsi, psychosis, nafsi, Tweet, khiyaano, khiyaamo, khayaali ah, khiyaamo, WvGGZ
10 December 2019 ee 05: 37
RIVM waxay ka dhigtay websaydh aad u qurux badan sheekooyin aad u qurux badan iyo sawirro leh carruur dhoola cadeynaysa. Laakiin hadaad sii fiirsato waxaad runtii ka heli doontaa waraaqaha dhabta ah. Nasiib darrose, dadku aad ayey uga xun yihiin inay qaataan dhibaatada si ay u akhriyaan buug ama warqad yar oo taxaddar leh.
Ma jiraan wax caddeyn ah oo muujin kara in tallaalladu gudbin karaan fayraska, laakiin haddii aad hayso waraaqda xirmada, waa suurtagal.
Sidoo kale way cadahay in caruurta min 9 ilaa 12 bilood laga yaabo inaysan ka jawaabin tallaalka.
Sidoo kale u qaado dhibaatada si aad u baabi'iso waxyaabaha kujira, dhab ahaantii wax fiican maahan inaad toos toos ugu dhex gasho marinka dhiigaaga. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay dhallaanka aan weli haysan nidaam dhiig oo gaar ah maskaxdooda.
Runtii waad u sheegi kartaa sheeko si cad loo xaqiijiyey maxkamada dhexdeeda, bal sug tani waa sababta sharciga wax looga baddalay. Miyay kaa go'doomi karaan si aadan u sheegi karin sheekada aasaasay?
10 December 2019 ee 11: 50
Waxaan u arkaa inay khaas tahay inaad leedahay garsoorka
siinayaa faa'iidada shakiga. Aynu sidaa u dhigno. Markaan eegno inaan ognahay cidda xukuma shacabka caadiga ah oo ay si cad ugu metelaan garsoorka.
10 December 2019 ee 19: 16
Garsoorku ma aaminsana laakiin haddii aad leedahay sheeko aasaasi ah oo ay soo baxdo markaa waad ku guuleysan kartaa cadaadiska dadweynaha.
10 December 2019 ee 11: 22
Xerooyinkaas ayaa horeyba u jiray, aniga, Ameerika jirana, waa xeryaha Fma.
Waxaan ku leennahay Zaanstad.
10 December 2019 ee 12: 43
Maya "is burinaya" iyada oo aan "is burinaya"!
Voltaire * Waan necbahay waxaad tidhaahdo, laakiin waxaan difaaci doonaa xuquuqda aad u leedahay inaad noloshayda ku sheegto.
Asalka: Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, hadhuudh aniga ii battrai jusqu'au bout ku shub que vous puissiez le dire.
10 December 2019 ee 13: 13
Xuquuqdaas ayaan markaa ka jirin Nederland. Waxa sharcigu yiraahdo waa astaan ​​sharci iyo raalli haddii aad hesho. Fikraddaada kama duwanaan karto heerka fikirka heerka, ee danaha wiilasha.
10 December 2019 ee 13: 04
Sirinjiye macaan ee is biirsaday oo aluminium ay ku jirto fayras nool oo aad u daciifa ama unugyada fayraska dhintay. Iyo waxa kale ee ku jira. Taasi weligeed ma noqon karto mid caafimaad qabta ama miyay jiri kartaa? Laakiin sidoo kale waxaan qaadanayaa mid sababtoo ah haddii kale anigu kama tirsana. Markaa cidlo ayaan dareemayaa ka dib markaa waxaan bilaabayaa inaan naftayda ku fekero ka dibna waxay i siinayaan siliingeyada daroogada mar alla markii ay igu daadiyaan qolka noocaas ah. Haa, laakiin iskaashi oo aqbal daaweyntaada maxaa yeelay waa muhiim! Ma jiro qalab cabbiraad lagu arko haddii aad qabtid shisoofrani, cabsi, jahwareer ama gardarro. Haddana cilmu-nafsiga waxay ku saleysan yihiin buugaagta wax-barashada ee aan lahayn xaqiiqooyinka dugsiga ka baxsan. Waxay si fiican u yaqaanaan waxaad haysato waana inaad aqbasho inay yihiin khabiir ku habboon adiga. Qufac
Sanadihii ugu dambeeyay, xabsiyadaas way xireen, sida Xamar iyo faasaska. Waxay noqdeen kuwa wax caayaya, ayay kuu sheegtay, laakiin taasi waxaa lagu xaliyay Maxbuus Mareykan ah oo Maxali ah oo dhab ah, oo runtii aad muhiim u ahaa. Madurodam waxay haysataa koob runtii aad u qurux badan hadda, dabcan, kama dambeyn karo. Sababtoo ah waddankan waxaan ugu fiicanahay wax kasta marka la barbar dhigo bini-aadamka kale. Addoomada ugu dadaalka badan ayaa laga heli karaa halkan, maxaa yeelay haa waa wax walba oo ugufiican.
10 December 2019 ee 16: 58
Xadgudubyo badan, sharciyo la yaab leh, Nederland iyo mustaqbal ifaya ayaa ku saleysan siyaasadaha laga yaabo inay ku jiraan ama aan lagu darin sharciga. Haddii aan rabno inaan bedelno siyaasaddaas, si kastaba ha noqotee waxaan weydiin doonnaa kuwa haysta jagooyinka muhiimka ah Nederland sidaas darteedna go'aaminta siyaasadaha, ragga ku jira qoraalka, inay iska daayaan jagooyinkaas muhiimka ah ama ay la wadaagaan dadka caadiga ah. Iyagu taas yeeli maayaan sababta oo ah waxay ku raaxeystaan ​​xoog, lacag, mudnaan iyo mudnaan ay dadka caadiga ahi aysan ku salaysnayn jagooyinkaas muhiimka ah. Laga yaabee in beeralleyda ay wali xaqiijin karaan Ciidda Kirismaska ​​oo ay ku soo bandhigayaan bandhigyadooda bisha Diseembar, dabcan qof kastaa wuu sii wadaa mas'uuliyadda sharciga. Iyo in wiilashu rabaan inay si iskood ah uga tanaasulaan jagooyinkooda muhiimka ah. Malaha waxbaa ugu dambeyntii dalkan ka dhacaya? Waa inaan wali arkaa. Si kasta oo ay ahaataba, beeraleyda, shacabka iyo dadka banaanka ahba waxay moodayaan in daqiiqad walbo lagugu garaacayo Laakiin ma ogtahay taasi, sax?
11 December 2019 ee 10: 49
Waxaa sidoo kale jira dadka Nederland jooga oo u maleynaya xeryaha noocan oo kale ah inay yihiin figrad fiican.
Sawirka muuqaalka ayaa muujinaya jawaab celin ka timid lammaane khaniisiin ah oo qaba gabar.
Waxaan qorey marar badan in ujeedada Dagaalkii Labaad ee Adduunka uu ahaa in la xakameeyo kooxaha qaarkood ka dibna la siiyo xaalad aan xad gudub lahayn. Mid ka mid ah kooxahaas dadka ah ayaa hadda xakameynaya dadka ku jira xeryo ku yaal Falastiin hore kooxda kale waxay sidoo kale noqon doontaa xisbiga dulmiga leh ee ku raacsan xeryaha uruurinta ("kaamamka dib-u-waxbarasho"). Xaqiiqdii anigu waxaan ka hadlayaa bulshada LGBTI, taas oo dhowaan fiicnaan doonta haddii dadka diida dacaayadaha jinsiga loo diro xero noocan oo kale ah. (Oo ay noqotaa 'xero' 'dabcan si fiican ayaa loogu beddelay' xarun daryeel ')
12 December 2019 ee 21: 07
Dadka wanaagsan waxay u arkaan wax wanaagsan.
Dhammaantood waxay ku mashquulsan yihiin qurxinta Kirismaska. Janno intee le'eg ayay noqon kartaa haddii aad taas samayso.
Si kastaba ha noqotee, muuqaallada waa khiyaaneeyaan waana isku day lagu doonayo in lagu beddelo xumaanta ka jirta adduunka dibedda lagu qurxiyo.
Muwaadiniinta wanaagsan waxay u dhaqmaan sidii adoomo fikir leh
taasi waxay shaqeyn kartaa oo keliya iyadoo dib loo riixayo waxyaabo xunxun. Immisa shaqsiyadeed ayaa celcelis ahaan muwaadin wanaagsan u lahaan doona la qabsiga runta
Malaha waa inaan xoogaa xoogaa isku qurxiyo. Amiirka waxaa laga yaabaa inuusan qaawan gebi ahaanba. Maya kuma guuleysto.
Wax qurxin ahi sanadkan ma jiraan.
13 December 2019 ee 09: 33
Go'aan caqli leh marka loo eego duruufaha jira. 😉
16 Janaayo 2020 at 12: 52
16 Janaayo 2020 at 13: 19
« Cadaadiska saaran caruurta waa mid aad u weyn!
Jimce Jimce: sida carruurta ku jirta dugsiyada ay uga buuxsameen dacaayadaha LGBTI »
Guud ahaan Wadarta: 15.886.842
Martin Vrijland op Nidaamka lidka diyaaradaha ee Iiraan ee qaatay Boeing 737-800 (dayuuradda PS752) ma la jabsaday?
SalmonInClick op Liibiya waxay bixisaa caddeyn ku saabsan wadamada Yurub ee ugu horreeya ee ay Turkiga qaadi doonaan
Sunshine op Liibiya waxay bixisaa caddeyn ku saabsan wadamada Yurub ee ugu horreeya ee ay Turkiga qaadi doonaan